Itti-aantuu PBO: 'Boordichi dhimma alaabaa waggaaf tursiisee amma kaasuun ABO waliin walitti nu buusuuf' - BBC News Afaan Oromoo
Itti-aantuu PBO: 'Boordichi dhimma alaabaa waggaaf tursiisee amma kaasuun ABO waliin walitti nu buusuuf'
29 Muddee 2019
Paartiin Biyyoolessa Oromoo (PBO) Alaabaa ABO waliin walfakkaatu Boordii Filannoo Biyyaalessaatti dhiheesse jechuun akka alaabaa isaa jijjiiru murtaa'eera.
Dhimma kanaafi dhimmoota biroo paartichaa irratti Dura Teessuu Itti-aantuu PBO Aadde Seenaa Gonfaa waliin turtii taasifneerra.
Aadde Seenaan barsiistuu Yunvarsitii Saayinsiifi Teeknolojii Adaamaafi yeroo ammaa kanammoo Yunvarsitii Finfinneetti barattuu PhD ti.
Waggoota dheeraadhaaf miseensa paartii siyaasaa ta'uu baatanillee paartiilee mirgaafi dantaa uummata Oromootiif falman kanneen akka ABO fi KFO leellisaa turuus himan.
"Paartilee haqa uummataatin deeman hunda milkii isaanii hawwina ture. Gaafa isaan dorgomanis milkii isaanii hawwina ture. Ergasii waan mootummaa biyya bulchu kanaan walitti na fidurraa fagaadheen hojuma kiyya hojjechaa ture," jedhu.
Akkamitti gara hooggansa paartii siyaasaatti akka dhufan yeroo himtus: "Dhaabni siyaasaa B/J Kamaal Galchuutiin hoogganamu kun erga biyya keessa galee kora dhaabichaa irratti hirmaadheen sagantaan dhaabichaa waanuma onnee kiyya keessa tureef itti makame jetti.
Ergasii kora biraarratti hirmaannaa dubartootaa jedhanii itti-aantuu hayyu dureetin muudamee hojii jalqabe," jedhan.
B/J Kamaal Galchuu aangoo irraa 'kaafaman'
Waligaltee dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda
Kora paartileen Oromoo 'bakka gahan itti of ilaalan'
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa murtee paartiin isaanii alaabaa isaa akka jijjiiru dabarse kan ilaaleenis 'murteen kun murtee nuti tasayyuu hin eegnedha,' jedhu.
"Jalqaba nuti alaabaa sadii kora irratti dhiheessinee alaabicha kan filate ummata. Alaabaan amma kan ABO tin walfakkaata jedhame kun garagarummaa ifa ta'e kan qabudha.
Ummanni Oromoo ammoo alaabaan ABO fi PBO Kamtu kami jedhee ni beeka. Kanaafuu, ummata Oromoo biratti burjaajiin inni uumu tokkoyyuu hin jiraatu," jedhan.
Waggaa tokko darbe kanatti hayyama galmeetiif marsaa afur Boordii Filannoo Biyyaalessaatiif iyyata alaabaa keenya ibsu waliin dhiheessineerra kan jedhan Aadde Seenaan, amma dhumarra gahanii murtii akkanaa kennuun shira qaba jedhu.
"Gaaffii kaleessa nuti gaafanne amma nu gaafachuun isaanii mariin nuti KFO fi ABO waliin eegalle shira isaan karoorsan waan jalaa fashaleessuufidha. Haga har'aa osoo nu hin gaafatiin turanii gaafa nuti sadan keenya marii jalqabnu bariituu dhufanii waan dura arganii bira darban kaasuun PBO fi ABO'n akka wallolluuf jedheen amana," jedhan.
"Marsaa sadii waa'ee alaabaatuu nutti hin kaasne. Amma marsaa dhumaa kanarra gahanii alaabaa keessan jijjiiraa nuun jedhan. Garaagarummaa alaabaa lamaan gidduu jirus sirritti ibsinee galchine. Murtii kanas fuula Feesbuukii isaanii irratti argine malee xalayaan nu gahe hin jiru," jedhu.
Akkaataa Boordiin Bilannoo Biyyaalessaa ajajeen alaabaa paartii isaanii jijjiiruufi dhiisuu irratti garuu paartiin isaanii ofdura mari'atee akka murteessu himan.
Gochi kun dhaabota lamaan waldhabsiisuuf kan bu'uurefate ta'us ABO'n alaabaa kun isaaniif mirkanaa'uu isatiif mormii akka hin qabaanneefi 'Baga Gammaddan' jennaan jedhu.
Alaabaan PBO'n itti fayyadamaa tures haalluu alaabaa ABOtin walfakkaatu haa qabaatu malee qarri urjiisaa 22 ta'uufi isaanis 11 dheeraa fi 11 ammoo gabaabaa ta'us himu.
Egeree paartilee siyaasaa Oromoo: 'Diimokiraatiik fi Rippablikaan'
Boordii Filannoo keessaa qaamni alaabaan ABO fi PBO walfakkaata jedhe, alaabotni kun garaagarummaa bu'uuraa inni qabu osoo sirritti hin xinxaalin 'uummata burjaajeessa' jechuun murteessan jedhu.
Waa'ee paartii Badhaadhinaa kan ilaaleenis, PBO'n paartiin kun eenyummaa sabaaf sablammootaa kan dhabamsiisudha jedhee amana, yaaddoo guddaa nutti uumes jedhu.
"Uummanni Oromoos ta'ee saboonni biyattii hundi mootummaa ofiisaanitii filataniin walitti dhufanii Itoophiyaa ijaaruu qabu. Alaabaa waliinii kana naaf haa ta'u jedhanii filachuu qabu. Hamma kun hin jirretti nuuf yaaddoodha," jedhan.
Itoophiyaan ijaaramumarraa rakkoo qabdi kan jedhan Aadde Seenaan, rakkoon har'a Oromoofi uummanni Itoophiyaa keessa darbaa jiran kunis sababa ijaarama irraa rakkoo qabduuf.
Impaayera qawweedhaan ijaarame diiganii impaayera filannoodhaan ijaaramtetti cehuu qabdi jennee amanna jedhu.
"Akkaataa isaan amma deemanirraa yoo laallu Itoophiyaan yoo jedhan, 'Itoophiyaa tokkittii, alaabaa tokkichaafi biyya tokko' jedhanii uummata keenya keessatti lafa dhiitaa bahan sana madaa keenya kaleessaa haala nu yaadachiisun kan isaan deemaa jiran.
Kanaaf, nuuf kuni yaaddoo guddaa nutti uuma," jedhan Adde Seenaan.
Obbo Jawaar Mohaammad filannoo baranaa irratti akka hirmaatan erga ibsanii asitti paartii kamitti makamu kan jedhu tilmaamni garagaraa jiraatus, PBO waliin hojjechuuf garuu gaaffiin dhiheessan akka hin jirres himan.
B/J Kamaal Galchuu: 'Murtee aangoo irraa ka'u eegaan ture'
3 Elba 2019
Gaaddisa Hoggansa Oromoo: Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hunduu dantaa Oromoof gaaddisa tokko jalatti waliin hojjechuuf waliigalan
Korri paartileen Oromoo 'haala qabatamaa naannichaafi cee'umsa gara dimokiraasii irratti' xiyyeeffate taasifame
Siyaasa Itoophiyaa: Paartileen siyaasaa Oromoo alaa galan maalitti jiru?
21 Hagayya 2018
B. J Kamaal Galchuu: ''Ministira Muummee Dr. Abiy waliin Yugaandaatti mari'anne''
15 Waxabajjii 2018
Heenok Gabbisaa: Egeree paartilee siyaasaa Oromoo - 'Diimokiraatiik fi Riippablikaan'
Jilli dhaaba Janeraal Kamaal Galchuufaa biyya gale
'Filmaataan nu haa ga'u, nutuu beekna wanta nuuf ta'u'
Hiriirri mormii komaandi poostii Oromiyaa, Waashingitan DCtti gaggeeffame
Tola-ooltonni Faransaay afur Iraaq'tti badan
Jeettiin motora lakkuu addunyaatti guddaadha jedhame qilleensarra bahe
Iraan nama cimaa qoricha daddabarsuun beekamu 'Naacha Galoo-galaanaa' jedhamu fanniste
Weerarri awwaanisaa UN deeggarsa akka gaafatu taasise
Namichi miseensota maatiisaa ja’atti dhukaasuun ajjeese
Poolisiin namoota mootora oofaa qaama dhiqatan adabe
Lammileen Iraaq Ameerikaan biyya isaaniitii akka baatu gaafachuun hiriira bahan